मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई युरोपबाट आर्थिक सहयोग
दिनेश हरिजन, युरोप । गैरआवासीय नेपाली समाज साईप्रस युरोपले मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
युरोपको साईप्रसमा रहेका तराई तथा पहाडका प्रतिनिधिहरुले सप्तरी जिल्लाका शहीद परिवारको अबस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको भन्दै कोसिस फाउण्डेशन मार्फत एन.आर.एन. आई.सि.सि.का सदस्य रन्जित महतोले ५४ हजार ५०० नेपाली रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सप्तरीमा गत बर्ष सुरक्षाकर्मीद्वारा गोली प्रहारबाट हत्या गरिएका परिवारहरुलाई साईप्रस देशको कन्सुलेट डा. राजजिवन पन्जियारले ११,०००, रन्जित महतो २०,०००, सी.के. साह १६००, सुरेश कुमार साह ५५००, ओम कुमार सुरी ५५००, अन्तेश राउत २७००, एन.आर.एन. साईप्रसका कोषाध्यक्ष रामजेन साह ५५०० र एन.आर.एन साईप्रसका अध्यक्ष सुबास मल्लले २७०० नेपाली रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन् ।
महतोले कोसिश फाउण्डेशनका प्रतिनिधि डा. राम ज्ञान यादवलाई नेपाल गएर उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
काठमाडौं । जनता बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत निःसहाय सहयोग परिषद् धरानलाई १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको थप १ शाखा संचालनमा
काठमाडौं, ९ बैशाख । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कम्पनीको ३४औं शाखा रामेछाप जिल्लाको मन्थलीमा आइतबारदेखि संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याम थापाले संयुक्त रुपमा गरेका छन् ।
सिटिजन्स बैंक १२ वर्षमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल १२ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त अवसरमा बैंकले केन्द्रीय कार्यायलमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
सेञ्चुरी बैंक र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ ।
ग्लोबल आइएमई दोस्रो राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड २०७४ हुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले आयोजना गरेको दोश्रो राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड २०७४ को मुख्य प्रायोजन ग्लोबल आइएमई बैंकले गर्ने भएको छ ।